Ahapụ maka mmalite azụmahịa, ndebiri akwụkwọ ozi ngwa ngwa
Mma gị na ịde style: njikọta ...
Ngwa kọntaktị asụsụ Oriental: Chinese
Edere site Tranquillus | Sep 5, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Wantchọrọ ịmepụta ma ọ bụ weghara azụmahịa, ma ọ bụ SAS, SASU, SARL ma ọ bụ ndị ọzọ, ka ị na-edebe ọrụ gị ugbu a? Rịba ama na onye ọrụ ọ bụla nwere ikike ịhapụ maka okike ma ọ bụ iweghara azụmaahịa. Tụkwasị na nke a, a ghaghị iburu n'uche ndokwa ụfọdụ. Ndị a bụ usoro ị ga - agbaso maka arịrịọ ịhapụ maka ịtọlite ​​ma ọ bụ iweghara azụmaahịa. A ga-enye gị akwụkwọ ozi arịrịọ.
Kedu otu esi aga n'ihu na arịrịọ maka ezumike ụgwọ maka azụmaahịa azụmaahịa?
Mgbe ị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ, ịnwere ike ịme atụmatụ ịmalite azụmahịa. Agbanyeghị, ọ chọrọ oge ụfọdụ n'aka gị. Ihe kpatara ya bụ na ịchọghị ịhapụ ọrụ ị na-arụ ugbu a, mana ị chọrọ oge iji rụchaa ọrụ gị. Mara mgbe ahụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ike irite uru site na ịhapụ ịhapụ iji mepụta ụlọ ọrụ.
Dabere na isiokwu, L3142-105 nke Usoro oru nke ihe edemede 9 nke iwu n ° 2016-1088 gbanwere, nke August 8, 2016, ị nwere ike ịrịọ ezigbo ịhapụ onye were gị n'ọrụ. Na mgbakwunye, arịrịọ gị ga-edo onwe gị n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ.
Iji rite uru na ezumike a, ị ga-ebu ụzọ nwee okenye nke afọ 2 n'otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'otu otu ma ghara irite uru na ya n'oge afọ 3 gara aga. Ikwesiri inwe dika oru ngo ihe okike nke na adighi mpi ya na ebe ị na aru oru.
Otú ọ dị, ị nwere ike ikpebi iheezumike nke ịchọrọ ma ọ bụrụ na ọ gafere 1 afọ. I nwekwara ike imeghari ya maka otu afọ. Agbanyeghị, ị gaghịzi enweta ụgwọ ọnwa n’oge a, belụsọ na ị họrọla ọrụ nwa oge. Nke ahụ kwuru, ịnwere ike ịrịọ ka ebufere gị ụgwọ ezumike ezumike gị.
GỤỌ Akwụkwọ edemede: kpughee ego ndị ọrụ gị
Iji rịọ maka ịhapụ maka okike ma ọ bụ iweghara azụmahịa ma ọ bụ ime ka CCRE dị mfe, ị ga-agwarịrị onye were gị n'ọrụ opekata mpe ọnwa 2 tupu ụbọchị ọpụpụ gị na ezumike, na-echefughị ​​ịkọ oge ọ ga-ewe. Rịba ama na agbanyeghị oge na ọnọdụ iji nweta ezumike ga-abụ nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ ahụ.
Iji nweta CEMR, ị ga-ederịrị akwụkwọ ozi na-arịọ maka ezumike maka azụmaahịa azụmaahịa. Ga-eziriri ya onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ site na iji ozi site na iji leta edebanyere na nnabata nke nnata, ma ọ bụ site na e-mail. Akwụkwọ ozi gị ga-ekwuputa kpọmkwem ebumnuche gị arịrịọ, ụbọchị ọpụpụ gị yana oge ọ ga-ewe.
Ozugbo onye were gị n'ọrụ natara arịrịọ gị, ha nwere ụbọchị 30 iji zaghachi ma gwa gị. Otú ọ dị, ọ ga-ajụ arịrịọ gị ma ọ bụrụ na i mezughi ọnọdụ ndị dị mkpa. Ọjụjụ ahụ nwekwara ike ime ma ọ bụrụ na ọpụpụ gị nwere nsonaazụ na mmepe ụlọ ọrụ ahụ. N'okwu a, ị nwere ụbọchị iri na ise mgbe ị natachara ịjụ mkpesa na ụlọ ikpe ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ịnabataghị mkpebi a.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ anabata arịrịọ gị, ha ga-agwarịrị gị nkwekọrịta ha n'ime ụbọchị 30 nke nnata. Gabiga oge a ma ọ bụrụ na egosighi onye were gị n'ọrụ, a ga-ewere arịrịọ gị ka enyere gị. Kaosinadị, ọpụpụ gị ka enwere ike yigharia izizi nke ọnwa isii n ’ụbọchị ịchọrọ site na ụbọchị ịchọrọ. Ọ kachasị na nke a na-eme nke a n'otu oge ahụ na nke ndị ọrụ ndị ọzọ. A nakweere omume a iji hụ na azụmahịa na-aga nke ọma.
GỤỌ Email ọkachamara na-aga nke ọma dị n'okpuru ọtụtụ njirisi
Gịnị banyere mgbe ịpụsịrị?
Nke mbụ, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ gị ma ọ bụ ịga n'ihu na-arụ ọrụ. Yabụ, ị ga-eme ka onye were gị n'ọrụ mara maka ọchichọ ịlaghachi ọrụ opekata mpe ọnwa 3 tupu njedebe nke ezumike ahụ. Maka ikpe izizi, ịnwere ike ịkwụsị nkwekọrịta gị na enweghị ọkwa, mana site na ịnweta nkwụghachi ụgwọ n'ọnọdụ ọkwa.
Ọ bụrụ na ị họrọla ịga n'ihu na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ gị ma ọ bụ ọnọdụ yiri ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Uru gị ga-abụ otu na tupu ịpụ na ezumike. You nwekwara ike irite uru na ọzụzụ iji gbanwee onwe gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Etu esi ede edemede nke ezumike maka okike ahia?
Arịrịọ nke CEMR gị ga-ekwupụta ụbọchị ọpụpụ gị, oge ịchọrọ ịchọrọ nke ọma yana ụdị ọrụ gị. Ya mere, ị nwere ike iji ndebiri ndị a maka arịrịọ ịhapụ na maka ịlaghachi na arịrịọ ọrụ.
Maka arịrịọ CEMR
Na [Obodo], na bọchị]
Akwụkwọ edebanye aha na nkwenye nke nnata
Isiokwu: Arịrịọ maka ọpụpụ na ezumike maka azụmaahịa azụmaahịa
Ebe m bụ onye ọrụ n'ụlọ ọrụ gị, kemgbe [ụbọchị], m nọ n'ọnọdụ nke [ọnọdụ gị] ugbu a. Agbanyeghị, dabere na edemede L. 3142-105 nke Usoro Ọrụ, Achọrọ m ka m rite uru na ezumike maka okike azụmaahịa, ọrụ ya ga-adabere na [kọwaa ọrụ gị].
Ya mere aga m anọghị na [ụbọchị ọpụpụ] ruo [ụbọchị nloghachi], yabụ ruo oge [ezipụta ụbọchị ole ndị m na-anọghị], ọ bụrụ na ị kwe.
Na-echere mkpebi n'aka gị, biko nabata, Madam, Sir, mmesi obi ike nke echiche m kachasị elu.
Akara Mbinye aka.
N'ihe banyere ịrịọ arịrịọ
Isiokwu: Arịrịọ maka nnabata
A no m na ezumike ugbu a ịmalite azụmahịa kemgbe [ọpụpụ ụbọchị].
Ana m agwa gị ihe m chọrọ ịmaliteghachi ọrụ m na ụlọ ọrụ gị, nke enyere ikike na edemede L. 3142-85 nke Usoro Ọrụ. Ọ bụrụ na, ọnọdụ m adịkwaghị, m ga-achọ iwere ọnọdụ yiri ya.
Ọgwụgwụ nke ezumike m ga-ahazi maka [ụbọchị ịlaghachi] ya mere m ga-anọ ya site n'ụbọchị ahụ.
Biko nabata, Madam, Sir, na mmesi obi ike nke echiche m kachasị elu.
GỤỌ Template Email maka ihe
Download "Maka-arịọ-site-CCRE-1.docx"	Po-une-demande-de-CCRE-1.docx - Ebudatara ugboro 2605 - 13 Kb
Download "Na-ikpe-nke-a-mgbake-arịọ-1.docx"	Na ikpe-nke-mgbake-arịọ-1.docx - Ebudatara ugboro 2582 - 13 Kb
Ahapụ maka mmalite azụmahịa, ndebiri akwụkwọ ozi ngwa ngwa January 8th, 2022Tranquillus
gara agaOzi banyere onwe gị: ihe niile ịchọrọ ịma
-esonụChepụta akwụkwọ ozi arịrịọ maka Mgbapụta Onwe Gị
Ọgwụgwụ mail, usoro nkwanye ùgwù ịhapụ
Ihe nzuzo nke email mkpesa edere nke ọma
ederede ederede na onu - nkuzi n’efu (14) nri (161) Ọzụzụ onwe onye na nke ọkachamara na-akwụghị ụgwọ (49) Freezụ ahịa achụmnta ego n'efu (81) Ọzụzụ n'efu Excel (28) Ọzụzụ ọkachamara (104) njikwa ọrụ n'efu ọzụzụ (15) asụsụ mba ọzọ ọzụzụ n'efu (9) Languagezọ asụsụ mba ọzọ na ndụmọdụ (22) Software na ngwa free ọzụzụ (20) Ụdị akwụkwọ ozi (19) ala (171) google ngwaọrụ n'efu ọzụzụ (14) Ọzụzụ PowerPoint n'efu (13) Ọzụzụ webmarketing n'efu (72) Ọzụzụ n'efu okwu (13)